Maraykanku maka dambeeyaa cudurka hargabka Shiinaha - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Maraykanku maka dambeeyaa cudurka hargabka Shiinaha
Waxa isa soo taraya shakiga weyn ee soo xoogeysanaya ee oranaya in cudurka hargabka Shiinaha ee ka dilaacay gobol qani ku ah Shiinaha warshadaha caalamka u dira alaabada la gato kuwooda qaaliga ah uu Maraykanku qayb ka yahay.
Wasiirka ganacsiga ee dalkaasi Maraykanka ayaa hore u sheegay inuu ku faraxsan yahay in cudur ku dhaco Shiinaha waayo ayuu yiri waxa faaiido ugu jirtaa dalkiisa oo buuxin doona kaalintii Shiinuhu ka baxay waa sida hadalka uu u dhigee.
Wuxuu kaloo intaas uu raaciyay in warshadihii ka guurey Maraykanka ay dib ugu soo noqon doonaan dalkiisa, wuxuuse ilaaway in dhaqaalaha Maraykanka uu Shiinuhu qayb weyn ku leeyahay.
Shiinaha ayaa qarka u saaran inuu Maraykanka ka qaado kaalinta koowaad ee dalka aduunka ugu dhaqaale weyn isla markaana ugu horeeya wax soo saarka sancada cusub.
Shiinaha ayaa garaacay Maraykanka dhinaca isgaarsiinta casriga kadib markii shirkadiisa Huwaawe ee isgaarsiinta ay noqotey shirkadda keliya ee ku guulaysatey qaybinta khadka cusub ee 5G ee xawaarihiisa internetka uu aadka u dheereeyo.
Wuxuu isku dayay inuu hawada ka saaro shirkadaasi qaybteeda telefoonada gacanta oo ah lambarka koowaad ee aduunka ee aad loo iibsado. Inkastoo uu hakiyay waxoogaa haddana qasaaraha ugu weyn waxa qaba Maraykanka waayo macaamiisha ugu badan waa aduunyada kale.
Xawliga sancada cusub
Shiinaha ayaa waxa ku yaala nus warshadaha aduunka wax soo saara oo badankoodu ka yimi Yurub iyo Maraykanka, waxana waxay soo saaraan lagu iibiyaa jabnaan suuqyada Maraykanka iyo Yurub.
Waxana halkaas ka soo gasha ganacsatada wadamadaasi malaayiin doolar bilkasta.
Ayadoo xaalku ku xunyahay Maraykanka oo hadda noqdey wadanka ugu horeeya ee faafiya kobcinta khaniisiinta ayaa waxa la filaayay inuu si kale uu u bakhtiiyo kobacaas xawliga ku socda ee Shiinaha.
Khuburada ku takhasusay siyaasada fog ayaa qaba in cudurka hargabka Shiinaha uu qayb ka yahay burburinta dhaqaalaha Shiinaha. Waxayna qabaan in cudurkan la soo sameeyay si qarsoodiyana loogu faafiyay gobolkaas warshadaha leh.
Waxay tusaale u soo qaateen halka aduunyada kale kala ordayaan naxdina kaqanan in cudurku soo gaaro dalalkooda, in Maraykanku warba u hayn waxaas, waxayna taas ku tilmaameen in xilli hore la tijaabiyay daawada cudurka ayna heleen daawadiisa.
Waxaan maqalnaa waxa socota tijaabada daawada cudurka waxyar kadibna waxa la helay is daawadiiba.
Taas waxay keenaysaa in Shiinuhu balaayiin doolar ku iibsado daawadaas si ay u xakameeyaan cudurka. Waana lacagta ay rabaan inay ku dhuftaan shirkadaha waaeey ee daawooyinka.
Nasiib wanaagse waxa Shiinuhu sheegay in kumanaan ay cudurka ka daaweeyeen ayagoo isticmaalaya daawooyin la isku daray.
Maaha markii ugu horeysay oo lagu dagaalamo hubka kiimikada siiba qaybta cudurada, waana tijaabo markasta socota oo ay isla yaqaanaan dalalkaasi waaweyn, waxaanse sugnaa inay soo baxdo mar uun ayuu yiri khabiir ku takhasusey hubka kiimikada.